Maxay sameeyaan hey'adaha dawladeed ee kala duwan? | Informationsverige.se
Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Dheeraad ku saabsan Iswiidhan / Bulsho / Maxay sameeyaan hey'adaha dawladeed ee kala duwan?
Waxaa Iswiidhan ka jira hey'ado dawladeed oo badan. Halkan waxaa ku soo socota warbixinta ku saabsan dhowr ka mid ah oo adigu shakhsi gaar ahaaneed laga fikirayo inaad la kulmi doonto.
Dheeraad ka akhri bogga intarnatka ee Hey'ada Socdaalka.
Xafiiska Shaqadu wuxuu mas'uul ka yahay inaad si sahlan shaqo uga hesho Iswiidhan. Iyagu waxay xitaa mas'uul ka yihiin in dadka dalka ku cusub qaarkood helaan qorsheyn gaar u ah si ay u shaqo galaan ama wax u bartaan. Tani waxaa lagu magacaabaa barnaamijka qorshaynta.
Qasnada Caymiska waxay mas'uul ka tahay qaybo badan oo ka mid ah nidaamka amaanka Iswiidhan. Qasnada Caymiska waxay gudoontaa codsiyadaada gunooyinka. Iyagu waxay go'aamiyaan haddii aad xaq u leedahay guno oo bixiyaan kaalmada iyo gunooyinka haddii aad xaq u leedahay.
Waxaa jira kaalmooyin iyo gunooyin badan oo kala duwan. Qasnada Caymisku waxay gacanta ku haysaa kaalmada kirada guriga, kaalmada caruurta, gunada barnaamijka qorshaynta iyo gunada marka aad xanuusanaysa in ka badan 14 maalmood.
Akhri dheeraad ku saabsan kaalmada iyo gunooyinka kuna qoran bogga Taageero iyo kaalmo
Akhri dheeraad ku saabsan kaalmada iyo gunooyinka kuna qoran bogga intarnatka ee Qasnada Caymiska.
Xafiiska canshuuraha waxuu mas'uul ka yahay canshuur celiskaada iyo kontoroollo kale si aad u bixisid canshuur sax ah. Waxeey kaloo mas'uul ka yihiin diiwaan galinta dadka iyo waxey bixiyaan warqadda caddeynta qofka. Xafiiska shaqada waxuu kaloo sameeyaa ID-ii kaarka.
Akhri dheeraad ku qoran Hey'ada Cashuuraha
Booliisku wuxuu baaraa lana dagaalamaa dembiga. Iyagu waxay xitaa ka shaqeeyaan si loo kordhiyo amaanka iyo in laga hortago dembiyo cusub.
Akhri dheeraad ku saabsan kuna qoran bogga Booliiska.
Gudaha degmo waxaa ka jira wax lagu magacaabo adeega arimaha bulshada ama maamulka arrimaha bulshada. Iyagu way kala duwanaan karaan dhanka degmooyinka kala duwan sida la go'aamiyay inay u shaqeeyaan. Adeega arimaha bulshada wuxuu raacaa sharciga adeega arimaha bulshada kaas oo khuseeya nooca xuquuqda aad u leedahay kaalmada bulshada, daryeelka iyo xanaanada. Haddii ay ku haysato dhibaato dhaqaale oo aanad is masruufi karin keligaa waxaad codsan kartaa kaalmada dhaqaale. Dheeraad ka akhri bogga intarnatka ee degmadaada si aad u ogaato waxa ansaxa ah.
Dheeraad ka akhri bogga intarnatka ee Maamulka Gaadiidka.
Akhri dheeraad ku saabsan sidaad u codsanayso ogolaanshaha barashada wadista baabuurka.
Akhri dheeraad ku saabsan waxa ansaxa ah marka aad haysato leysinka baabuurka dal kale kuna qoran bogga intarnatka ee Gudiga Gaadiidleyda.
Hey'adda qaan-ururinta badanaa waxaa loo yaqaan Kronofogden. Hey'adda qaan-ururinta waxeey soo ururisaa deeymanka aan la bixin. Haddii aad qof lacag ku lee dahay, Hey'adda qaan-ururinta ayaa ka caawin karto soo celinta lacagta. Hey'adda qaan-ururinta waxeey kale oo ka shaqeeysaa sifeeynta deeymaha. Taasi mecnaheed waa in Hey'adda qaan-ururinta qofka deeymo weeyn lagu lee yahay ku caawiyo sida uu habeeyn lahaa dhaqaalihiisa.